Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Micro-poids Aluminium Malab Suuqa
Waqtiga dirida: 7-15 maalmood oo shaqo
Supply Kartida: 5000 PCS maalintii
Core Weelka macdanta leh ee malabka aluminium ee cusbada leh ee khafiifka ah waxaa laga sameeyaa foornooyin lakabyo badan leh oo isku xidhan. Badanaa dhererka dhinacu waa ka yaryahay 3 mm. Malab malabku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka hexagon ee caadiga ah, guryaha farsamoyaqaanka ah ee wanaagsan, dusha sare iyo wixii la mid ah. Waxay u wanaagsan tahay miirayaasha tayo sare leh, warshadaha farsamada, qalabka korantada, iyo sidoo kale beeraha kale.
Strength Xoog sare
Flat Feejignaan sare
Insu Xakameynta codka
Protection Ilaalinta deegaanka
sooc Dhererka dhinaca (mm) Calool xumada (mm) Cufnaanta (kg / m³)
Daawaha Al3003, Al5052
Foomka Alaabada Aan baahsaneyn (xayiraad, xarig) ama la ballaariyay (jeex),
Aluminium malab-baraf ah oo milix leh
Gudiga abaaraha ee 'FRP malabka'
Mashiinka foorara ee otomaatiga ah ee dhammeystiran （BHM-GP-AH600）